Sidee si ay u gudbiyaan Music, Video, Photos iyo xidhiidhka ka dhexeeya HTC iyo iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Music, Video, Photos, Calendar, Messages iyo xidhiidhka ka dhexeeya HTC iyo iPad
iPad shaki la'aan waa kiniin kulul oo ay la socdaan adduunka, iyada oo ay design cajiib ah oo waayo-aragnimo user dareen leh. Waxaad daawan kartaa filimada, mahad photos, ciyaaro kulan ku yaal doono. Haddii aad tahay user HTC ah, oo hadda soo iibsadaan brand cusub iPad, sida hawada iPad, laga yaabaa inaad doonayso inaad bedelato music, videos, sawiro iyo files dheeraad ah oo ka soo HTC in iPad u madadaalada. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad ogolaanaysaa hoos u yahay in Apple ma ha u samaynaysaan. Dareen murugo? Haddii aadan haysan in. Waxaa jira HTC awood leh in software kala iibsiga iPad magacaabay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxay ka dhigaysa mid u quruxsan fudud si aad u wareejin xiriirada, music, videos iyo sawiro ka HTC in iPad, iyo habka kale ee ku xeeran.
HTC wareejiyo iPad Effortlessly, iyo qeybsanaan
Iyadoo click hal, HTC in ay koobi software kala iibsiga iPad music oo dhan, videos, sawirada iyo xiriirada ka HTC in iPad. Iyo guuldaradoodii sidoo kale waa run.
Ma aha oo kaliya in lagu wareejiyo HTC iPad, laakiin beddelaan iPad si fudud HTC;
Xiriirada Transfer, jadwalka, fariimaha, videos, muusig iyo sawiro leh hal click;
Beddelaan wax music video iyo in HTC / iPad qaabab filaayo in wax fiirinaya;
100% wareejinta xogta iyo khatar la'aan;
Fadlan u tag Wondershare MobileTrans u Mac Mac marka la isticmaalayo ah.
Demi HTC in iPad
IPad wareejiyo HTC
HTC Copy in iPhone
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Calendar, Messages, Photos, Music iyo Video laga soo HTC in iPad
Qaybta 2. Sida loo Copy Video, Photos, iMessages, Music, Calendar, Xiriirada iyo More ka iPad in HTC
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan Content ka HTC in iPad
Tan iyo Wondershare MobileTrans waxay ka caawisaa si ay u gudbiyaan xiriirada in xisaabaadka, sida Google iyo Twitter, waxaad saxiixi kartaa in xisaab ka hor ka dib markii ay 2 talaabooyinka xiga.
Tallaabada 1. Orod Software ah
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare MobileTrans ku PC. Si files ka HTC wareejiyo iPad, idinku waajibka ah inaad guji Phone in Transfer Phone .
Fiiro gaar ah: Lugood waa in lagu rakibay on PC si loo hubiyo in shaqada Wondershare MobileTrans sida caadiga ah.
Tallaabada 2. Connect HTC iyo iPad in PC
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan qalab HTC iyo iPad in PC. Software HTC in iPad aqoonsan doonaa labada qalabka. Markaas, waxaad ka heli furmo suuqa sida mid ku cad xaq.
Tallaabada 3. Photos Copy, Xiriirada, Video iyo Music ka HTC in iPad
Dhammaan files la koobiyeyn karaa waxaa lagu muujiyey in uu furmo. Browse files si loo hubiyo in wixii aad ku socoto in aad nuqulka. Markaas, bilowdo kala iibsiga faylka adigoo gujinaya Start Copy. Marka Wondershare MobileTrans ku ogaadaa in music iyo video la soo guuriyeen aan lagu ciyaari karin on your iPad, waxa ay si toos ah iyaga loogu badalo doonaa in iPad qaab filaayo - MP3 iyo MP4.
Qeybta 2: Sida loo Copy Content ka iPad in HTC
Gal xisaab marka aad damacdo inaad u guurto xiriir iyaga in aad HTC telefoonka ama kiniin. Marka loo eego HTC inay kala iibsiga iPad, Wondershare MobileTrans awoodi karaa inuu wareejiyo files dheeraad ah. Waxaa wareejin karaan dhammaan dadka ay khuseyso, photos, music, filimada, podcast, Lugood U, playlists, TV muujinaysaa iyo dhammaan qoraallada ku iMessages ka iPad in HTC.
Tallaabada 1. Connect labada HTC iyo iPad in PC
First of dhan, ordo Wondershare Mobilerans ku PC. Dooro Phone in hab Transfer Phone. Bareesada galay fiilooyinka USB ah si aad u hesho qalabka iPad iyo HTC ku xiran. Ka dib markii iskaanka iyo garashada, ee software iPad in HTC kala iibsiga ku tusi doonaa qalab ee ay suuqa kala.
Fiiro gaar ah: Si aad ha MobileTrans shaqada Wondeshare iyo jid sax ah, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood.
Tallaabada 2. ka iPad dhaqaaq Xiriirada, Calendar, Photos, iMessages, Videos, Music iyo More in HTC
Dhammaan files taageeray ayaa la hubinayaa. Si aad u gudbiyaan oo dhan oo iyaga ka mid, waxaad riix Start Copy. Ama, ka saar marks ka hor inta aan la rabin files iyo riix Start Copy. Xogta oo cad ka hor inta nuqul waxaa loo isticmaalaa si loo soo saaro file qalabka caga aad - qalab HTC ka hor inta suuqa kala iibsiga file. Sidaas darteed, waxaad eegi kartaa ama u uncheck sida ay go'aankaaga.
Fiiro gaar ah: Finish files ka iPad gudbaayo HTC? Hadda, waxaad u baahan tahay qalab Tababaraha HTC si aad u maareyso files waxa on. The Wondershare MobileGo for Android waa tababare dhan-in-mid HTC in ay si fudud ku wareejiso oo everyting Tababaraha on your HTC telefoonka ama kiniin.
HTC ay taageerayaan oo lagu daydo iPad
Android 2.1 si ay Android 4.4 HTC Mid ka mid ah M8, HTC Mid ka mid ah X, waxaan jeclahay oo HTC, HTC ugaar S A510E, HTC ugaar, HTC doonayay oo A9191 HD, HTC HD jecel yahay, HTC HAL V, HTC Droid DNA, HTC PC36100, iyo in ka badan >>
macruufka 5/6/7/8 iPad hawada, iPad mini bandhigay isha, iPad bandhigay isha, iPad mini, iPad 2, The iPad New iyo iPad
Xogta laga HTC dhaqaaq HTC
Xogta laga iPhone wareejiyo HTC
Content ka HTC dhaqaaq iPhone
Nuqul Faylal ay ka HTC in Samsung
Xogta laga iPad wareejiyo Android
Demi ka Android inay iPhone
IPhone wareejiyo Android
Samsung wareejiyo iPhone
Content ka iPad dhaqaaq Samsung
Nuqul Xogta laga Android inay Samsung
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Music, Video, Photos, Calendar, Messages iyo xidhiidhka ka dhexeeya H